Ciyaaryahan Jabriil Xasan Fariid oo loo sheegay inuu qalliin deg deg ah u baahan yahay – Gool FM
(Muqdisho) 18 Jan 2020. Ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Raadsan Jabriil Xasan Fariid ayaa dhaawac halis ah ka soo gaaray lugta bidix ee dhanka seedka, waxaana loo sheegay inuu qalliin u baahan yahay.
Xiddigan ayaa ku dhaawacmay kulankii guuldarrada 4-2 kooxdiisu kala kulantay naadiga Horseed, isagoo ciyaarta laga saaray qeybtii koowoad daqiiqadii 41-aad xilli markaas ay kulanka natiijo ahaan uu marayey 0-0.
Kabtankii hore ee kooxda Heegan Jabriil Xasan fariid ayay macquul tahay inuu muddo garoommada ma maqnaado, dhaawaca soo gaaray dartiisa.
Dhaawacan ayaa ah mid aad u daran maadaama xiddiga loo sheegay in seedkiisa lugta uu go’an yahay loona baahan yahay inuu galo qaliin deg deg ah, kaddib markii uu tagay mid ka mid ah Isbitaallada ugu waa weyn Magaalada Muqdisho.
Dhaqaatiirta Isbitaalka ayaa u sheegay xiddigan in uu mari doono qalliinka 23-ka bishaan Janaayo, maadaama uu dhaawacan halis ku yahay waayihiisa ciyaareed.
Jabriil Xasan Fariid waa mid ka mid ah weeraryahannada ugu wanaagsan ee soo matalaya xulka qaranka Soomaaliya, isagoo la xasuusto inuu mar ku guuleystay xiddiga ugu wanaagsan garoonk a(Man Of The Mach) ciyaar uu xulkeenna qaranka Soomaaliya la dheelay xulka Tanzania, inkastoo xulka loogu adkaaday 1-0, kulankaas oo dhacay sanadkii 2013-kii.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda Raadsan ayaa tani waxay ku noqonaysaa dhibaato hor leh, maadaama kooxda ay ku tashaneysay hannaanka wanaagsan uu ku jiro xiddigan Jabriil Xasan Fariid, isagoo sanad ciyaareedkan u dhaliyay hal gool, wuxuuna kooxdiisa u saftay saddex kulan.